Tanner Chrisensen: 45 Tilmaamood oo loogu talagalay Naqshadeynta Astaanta wax ku oolka ah | Abuurista khadka tooska ah
Tanner Chrisensen: 45 Tilmaamood oo loogu talagalay Naqshadeynta Astaanta wax ku oolka ah
Xirfadda iyo waxtarka astaanku wuxuu ku saleysan yahay qodobo kala duwan oo muhiimad gaar ah leh isla markaana ka dhigi doona farqiga dhismaha shirkadeed ee nuucaan ah. Qoraaga Tanner chrisensen waxay soo jeedineysaa xulasho aad u xiiso badan oo talooyin ah naqshadeynta astaanta iyo dhismaha aqoonsiga shirkadeed ee shirkad kasta. Haddii aad u baahan tahay inaad hesho qaddar dhiirrigelin ah iyo nooc ka mid ah hagidda, isugeynta soo-jeedinta waxay kugu habboon tahay adiga sida galoofyada.
Xaqiiqdii, way fiicnaan laheyd haddii markaad bilowdo mashaariicdaada oo aad kujirto wajiga horumarka, inaad isbarbar dhigto khadka shaqadaada liiskan oo hubi inuu ku habboon yahay talooyinkan. Waa hab aad u wanaagsan oo lagu xaqiijiyo inaadan waxba iska indhatirin oo heerar tayo leh ay ka jiraan shaqadaada.
Ha u isticmaalin wax ka badan saddex midab naqshada astaanta.
Ka takhalus wax kasta oo aan gebi ahaanba daruuri u ahayn naqshadeyntaada.
Nooca qoraalka waa inuu ahaadaa mid fudud oo ayeeyadaa ay akhrin karto.
Astaanta waa in lagu aqoonsan karaa xaalad kastoo jirta.
U samee qaab ama qaab u gaar ah astaanta.
Gabi ahaanba iska indhatir waxa waalidkaa iyo / ama lammaanahaagu ka qabaan naqshada astaanta.
Xaqiiji in astaanta ay u muuqato mid soo jiidasho leh in ka badan saddex (3) qof.
Ha isku darin walxaha astaamaha caanka ah ka dibna sheegasho inay tahay shaqo asal ah.
Ha u isticmaalin clipart duruuf kasta ha noqotee, samee sawir u gaar ah.
Astaantu waa inay u muuqataa mid fiican madow iyo cadaan.
Hubso in astaanta la aqoonsan karo iyadoo la rogay.
Hubso in astaanta la aqoonsan karo adoo cusboonaysiin kara.
Haddii calaamaddu ka kooban tahay astaan ​​ama astaan, marka lagu daro qoraalka, u deji mid kasta qaab ay isaga kaalmaysanayaan midba midka kale, waana loo baahan yahay.
Ka fogow isbeddelada dhowaa ee naqshadeynta astaanta. Taabadalkeed, ka dhig astaantaadu inay umuuqato mid wakhtila'aan ah.
Ha u isticmaalin saameyno gaar ah (oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn: jillaabyada, hooska, milicsiga, iyo shucaaca iftiinka).
Ku hagaaji astaanta qaab-dhismeedka laba jibbaaran halka ay suurtagal tahay, ka fogow qaabab faahfaahsan
Ka fogow faahfaahinta adag.
Tixgeli meelaha iyo qaababka kala duwan ee astaanta lagu soo bandhigi doono: buugaag, bogagga internetka, baayacmushtarka, saxaafadda, warqad, caag….
U yeer dareemo geesinimo iyo kalsooni leh, weligaa ha caajisin oo daciifnimo.
Ogsoonow inaadan abuuri doonin astaanta saxda ah.
U adeegso khadadka adag ganacsiga adag, iyo khadadka siman ee ganacsiga jilicsan.
Astaanta astaanta ahi waa inay lahaato xoogaa xiriir ah waxa ay mataleyso. Waa inay kicisaa.
Sawir ma sameeyo astaan. Astaantu waa astaan, sawirkuna waa sawir.
Waa inaad macaamiisha kaga yaabisaa soo bandhigida.
Ha isticmaalin wax ka badan laba nooc ama far.
Qeyb kasta oo astaanta ka mid ah waxay u baahan tahay in la waafajiyo. Bidix, dhexe, midig, kor ama hoos.
Astaantu waa inay u ekaato mid adag, oo aan lahayn walxaha sudhan.
Raadi cidda arki doonta astaanta ka hor inta aadan la imaan fikradaha loogu talagalay.
Had iyo jeer ka dooro waxqabadka hal-abuurka.
Haddii magaca summaddu yahay mid xusuus mudan, magaca sumaddu waa inuu noqdaa astaanta.
Astaanta waa in la aqoonsan karaa marka muraayadda lagu dhejinayo.
Xitaa shirkadaha waaweyn waxay u baahan yihiin astaamo yaryar.
Naqshadeynta calaamaddu waa inay rafcaan u noqotaa qof walba, maahan oo keliya ganacsiga adeegsanaya. Astaanta waxaa loogu talagalay macmiilka maahan shirkadda.
Abuur kala duwanaansho. Kala duwanaanshaha badan, waxay u dhowdahay inaad u hesho midka saxda ah.
Astaantu waa inay u ekaataa mid iswaafaqsan qaabab kala duwan.
Astaantu waa inay fududahay in lagu sifeeyo qof inuu sharraxo qof kale.
Ha ku isticmaalin calaamadaha calaamadaha calaamadaha.
Fikradaha naqshadeynta adoo adeegsanaya qalin iyo warqad ka hor intaadan ka shaqeynin kumbuyuutarka.
Naqshadeynta mid fudud ka dhig. Ka fudud ayaa ka sii fiican.
Ha isticmaalin astaamaha "swoosh" ama globes.
Astaantu waa inaysan mashquulin, waa inay ku wargelisaa.
Waa inaad daacad ku noqotaa magacaaga.
Astaanta waa inay ahaataa mid muuqaal ahaan dheelitiran.
Ka fogow midabbada dhalaalaya ee dhalaalaya iyo midabbada madow, midabka madow.
Astaanta waa in aysan jebin mid ka mid ah xeerarka aan soo sheegnay.
Waxaan sidoo kale kugula talinayaa maqaal aad uga faa'iideysan kara arrintan: Su'aalaha muhiimka ah si aad u weyddiiso astaantaada
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Tanner Chrisensen: 45 Tilmaamood oo loogu talagalay Naqshadeynta Astaanta wax ku oolka ah
Ayaa nacaybkooda u rogay horumarka ku-meel-gaadhka ah ee astaanta xiddigta?
'Ophelia' oo ka socda 'Hamlet' oo uu qoray Michael Talbot
10 Cajiib oo Cajiib ah oo loogu talagalay Adobe Kadib Saameynaha Si buuxda loo Editing